Ogbunigwe egbuola Oladele Pius na Lagos
Mgbọ ogbunigwe leta-bọmbụ egbuola Oladele Pius, onye isi ndị otu Dredgers Association na Lagos. Afọ 27 gara aga, ụdị ịhe dị otu a mere wee kpọlaa Dele Giwa, onye nta akụkọ Newswatch, ala mmụọọ.
Taa bụ abalị 18 nke ọnwa Febụwarị, ogbunigwe ahụ a na-arọchi n’akwụkwọ gbwara n’okpuru ọchịchị Amuwo Odofin, na Lagos.
Onye isi ndị uwe ojii na Lagos, Mazị Umar Manko, na-ekwu na ogbunigwe ahụ abụghị nke a na-arọchi n’akwụkwọ ozi.
A ka na-anụ akụkọ dị ịche ịche gbasara otu ịhe a siri me. Ndị anya ha ruru mgbe ịhe a mere na-ekwu n’otu onye a na-amaghị onye ọ bụ weteere Oladele Puis akwụkwọ ozi n’ụlọ ọrụ ya, n’ebe elekere 11 nke ụtụtụ Mọndee. Mgbe onye nyere ya ozi ahụ lawara, Pius meghere akwụkwọ ozi ahụ. Anyị na-anụ na mgbe ahụ ka ogbunigwe gbawara, gbuo Oladele Pius, ma merụkwaa ndị ọzọ ahụ.